Ihe Na-akpata Ugbo Agricultural Compost Turner
World ama compost windrow Turner maka anụ ụlọ co ...
OA compost Ndinam igwe n'ihi na anụ ụlọ ezi nri c ...
TAGRM compost windrow Turner maka anụ ụlọ enyí ...
Hot ire compost Ndinam igwe maka anụ ụlọ anụmanụ ...
Cheap compost inggwakọta igwe n'ihi na anụ ụlọ ịnyịnya nwoke ...
kichin n'efu compost windrow Turner kichin n'efu compost igwekota nri ahihia compost igwe
M2600 bu crawaler kichin ahihia compost windrow Turner ya na hydraulic chụpụrụ. Ike ya bu 720 cbm / awa nke di ka ndi oru 100 n’oru oru, ya nwere ike igbutu udiri ahihia niile. Ntughari oge niile dị mkpa iji tinye ikuku na mmiri n'ime mkpo compost nke na-eme ka ọ dị ọcha.
Agricultural n'efu osikapa ahihia compost windrow Turner maka organice fatịlaịza
TAGRM compost windrow Turner maka anụ ụlọ enyí nsị na zoo
TAGRM M3000 na-ebugharị onwe ya na-ebugharị ikuku na-atụgharị ikuku na -emepụta ikuku ikuku dị mma maka ihe ndị na-emepụta ihe. Ọ nwere ike inye aka ịkwalite ihe ndị a na-akụpụta iji nweta gbaa ụka ọsọ ọsọ ma ghọọ fatịlaịza na-edozi ahụ.
Ngwa igwe na-eme igwe compost maka anu ulo nri ala compost windrow Turner
M3600 bụ ire ere na-ere onwe ya windrow compost Turner nke TAGRM. O nwere ike na-akpaghị aka zuru ezu n'aka, nwuo, mix, azọpịa na oxygenate composting ihe, na ịgba usoro nwere ike tinye mmiri na ferment na composting ihe.
Factory price ọbọgwụ nri compost Ndinam igwe anụ ụlọ igwekota na China
M4800 bụ ire ere ọkụ na igwe na-atụgharị compost a ma ama na China. Site na ígwè ígwè siri ike na ihe mgbakọ, yana ikike imepụta nke cubic 2500 kwa elekere, M4800 ghọrọ igwe kachasị mma maka saịtị na-emepụta compost.
EC biiti fọdụrụ composting igwe windrow Turner maka ire na Vietnam
Ezubere akụrụngwa TAGRM M2000 iji hazie ihe ruru mita cubic 430 nke compost kwa elekere dabere n'ụdị na ogo onye ntụgharị ahụ. Dị ka igwe na-ere ọkụ na-ebugharị onwe ya na China, M2000 nwere ike ịchekwa ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ 150.
M4800 ugbo n'efu compost Turner organic fatịlaịza compost Ndinam igwe Ero nsị windrow composting igwe
World ama compost windrow Turner maka anụ ụlọ ehi nri
compost Turner organic fatịlaịza compost Ndinam igwe ero nsị windrow composting igwe
M2600 bụ onwe-propelled compost mbịne igwe. Ya ígwè ígwè na nzukọ ihe onwunwe na-adiaha site na Ngwuputa ụlọ ọrụ, nke nwere uru ndị dị otú ahụ dị ka ogologo ọrụ ndụ, obosara mmegharị dị iche iche n'ala, ala ịnọgide na-eri, mfe nnọchi, wdg
Hot ire compost Ndinam igwe n'ihi na anụ ụlọ anụmanụ nsị n'efu
Compost Turner emeputa eco friendly compost Turner sugarcane bagasse organic fatịlaịza compost igwe